PPn Yeroo filannoo dheereffate. Miliyoona 18 qoofatuu galmaaye, kunis lakkoofsa caasaa paartii siyaasa PP qofa kan hincaalledha! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsPPn Yeroo filannoo dheereffate. Miliyoona 18 qoofatuu galmaaye, kunis lakkoofsa caasaa paartii siyaasa PP qofa kan hincaalledha!
#Xobbeen Technology fayyadamee Rooba roobsisu, Yeroo filannoo dheereffate.
Ummattoota Ethiopia Miliyoona 120 keessaa Miliyoona 18 qoofatuu galmaaye.
#Miliyoonni102 hoo guyyaa kennameef kana keessatti akka galmaayuufii?
#Mirgaa_fi_Dirqamni gara gara.
#Filannoon mirga, waan akka Waraanaatti godhii fi hin godhiniin dirqamaan raawwattuu miti.
#Gaashe Zannabeen fa’a, Koloneelummaa gita hojii isaanii isa waraanaa sana waan hojitti hiikaa jiran fakkatu.
Filannoo irratti hirmaadhaan,
-ummata buufata filannoo dhaqee kaardii fudhatuu dide,
-Mana irra deemanii kennuufiin dadhabanii,
-Zeeytii fi Sukkaaraan dadhabanii,
-Buufata konkolaataattii Kaardii fudhattan malee hin imaltan jechuun doorsisaan dadhabanii,
-Ammas yeroo kennameef irratti guyyoota dababalataa gaafataniiru.
Bu’uuruma kanaan, Boordiin filannoo biyyooleessaa Itoophiyaas tole jedhee galmee filattootaaf yeroo dabalataa akka kenne beeksise.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa filannoo bara kanaaf namni miliyoona 18 galmaa’uu isaanii eere.
Impaayera Itoophiyaa uummata lakkoofsaan miliyoona 120 ol qabdu keessatti namooti hangi kun qofti galmaa’uu jechuun lakkoofsa caasaa paartii siyaasa PP qofa kan hincaalledha.
Biyyattii keessatti hogganooti paartii mormituu hedduun mana hiraarsaa kan jiran wayiita ta’u, osoo hogganni paartii mormituu hidhamee jiruu durree dorgomaa hinqabne keessatti maqaan filannoo baanamaa akka jirudha kan hubatame.
Kun ammoo bakkayyuutti mormii uummataa kan kaase yoggaa ta’u, uummatni biyyattii hedduun filannoo kijibaa kana irraa qooda akka hinfudhanne waliif dhaamaa jira.
Akka karoora boordii filannoo kanatti namootiin miliyoona 50 ta’an filannoo bara kanaaf nii galmaa’u kan jedhu yoggaa ta’u, hanga Kamisa darbeetti lakkoofsi uummata filannoof galmaa’anii 18,427,239 qofa akka ta’an gabaafame. Haa ta’u malee hanga uummata galmaa’an jedhamuu kun iyyuu kijiba ta’uu mala shakkiin jedhus nii jira. Guutuutti uummati Impaayera biyyattii keessaa hedduun filannoo kana irratti hirmaachuuf fedha akka hinqabne himamaataniiru.
Oromoon PP duukaa hiriiru yoo jiraate inni garbicha! Gabrummaaf garaan warra of gurguree dhihootti Oromoon bilisa baasa! Yoomittuu diraamaan isaan ittiin Oromoo gowwwomsan lafaratti mitii samii iyyuu yoo fidan hin hojjetu! Oromoo doofaa heddu qabna! Inni sammuun isaa bilisoome qofti ni ga’a! PP diraamaa hin dandeessu! Hin milkooftus!!
Hubannaaf Naannoo Amaaraatti ummatni dhugumaan gadi bahee Abiyyi mormaa jira! Faallaa kanaa Abiyyi garuu Oromiyaa keessatti akka filamnuuf nu fayyada jadhee PP Amaaraa waliin diraamaa hojjachaa jira! Wanti ta’aa jiru hundi waan lamaafi
1, Oromoo Amaaraatu nurratti duule jadhanii off jala hiriirsanii Oromiyaa keessatti hiriira deeggarsaa baaffachuuf nu fayyada jadhii diraamaa hojjachaa jiru.
2, Amaarri sirna duru deebisuu deema jadhanii ummata burjaajessanii filannoo akka PPn Oromiyaa keessatti ummatni nu filatuuf nu fayyada jadhanii PP Naannoo Amaaraa waliin Abiyyi dhooksaan diraamaa hojjachaa jira! Afaan gubbaa wal abaaru. Lafa jala garuu waliin hojjatu. Ummatni keenya waan deemaa jiru hubachuu……
Via Ahmed Jamal
“የእፉኝት ልጆች አፈርሳቸዋለሁ” መንግስት፣ 30 ሰዎች ተገደሉ፣ ኤርትራን የከለከለው ህብረቱ፣ ከባህርዳር አዲስአበባ ተከለከሉ፣ CNNና ትግራይ| EF